Valve izere nenhau huru dzenyika yekutamba uye Linux | Linux Vakapindwa muropa
Valve izere nenhau huru dzemitambo uye yenyika yeLinux
Isaac | | GNU/Linux, Linux Mitambo, chiutsi
Valve inoshanda zvakanyanya maererano nezviziviso munhau uye dzese idzo inhau dzakanaka dzinokanganisa nyika yekutamba uye neimwe nzira vashandisi veLinux vane hukama nazvo. Kune rimwe divi isu takazviziva izvozvo Valve uye AMD vakabatana nemauto ekuvandudza ruzha muchokwadi chaicho kuunza zvimwe zvechokwadi kune nyika yevaraidzo yedhijitari. Valve ichatsigira AMD's TrueAudio Inotevera (TAN) pane yayo Steam Audio system, nekudaro ichivandudza acoustic kuomarara uye kurira kwemhedzisiro mhando pamwe nekuchimbidza kurira kwekuteerera uye nekupa zvirinani kuita kwese nekuchengetedza 20-25%. Kuverenga paGPU.
Iwe unofunga kuti ndizvo here? Kwete kwete. Nhau dzakanaka dzinotevera kubva kuValve dzinobva kuSteam vhidhiyo chitoro chemitambo, uye ndechekuti ivo vakapa imwe dhata pane chikamu chemusika mukutengesa kwavo uye zvinoita sekunge Ndira 2018 yakazivisa kuwedzera kwemazita anouya kuLinux zvakanyanya. Concretely zvakaitika kuva 0.15% yakakwira pane zvakaverengeka zvakapfuura, uye kunyangwe zvingaite senge zvishoma, ichokwadi chimiro chakanakisa tichifunga kuti huwandu hwazvino hwekuparadzira Linux hunoramba huri pa0.41% nekuwedzera ikoko. Icho chichiri chidiki, asi nguva idzo tsika dzaive dzisina kunaka dzaenda kare ...
Valve yakasimbisawo "rudo" rwayo rweGNU / Linux nechafambiso chitsva uye ndezvekuti iye akabhadhara mumwe mugadziri wemifananidzo yeakavhurwa sosi mapurojekiti, sekusimbiswa nemasocial network. Izvi kudivi rimwe zvinoreva kuvandudzwa muchikamu chino nekuda kwebasa rakaitwa namugadziri akadaro, asi zvakare chiratidzo chekuti Valve yasvika pamusika weLinux kuti igare kwenguva refu. Kuzvipira kwavo kuri kuwedzera uye iyi data inozvisimbisa.
Mugadziri wekupedzisira kujoina anga ari Daniel Schürmann, asi kusaina kwaValve hakuna kupera ipapo kubvira Samuel "hakzsam" Pitoiset akambotorwawo basa, uye Timoteo Arceri vanga vachitoshanda kuvandudza madhiraivha eLinux uye vacharamba vachiita basa iri mukati mezvivakwa zveValve . Asi kune rimwezve zita rekuwedzera, uye ndiAndrés Rodríguez. Vachaenderera nebasa rakanaka reValve nemipiro kuLinux nyika iri kuve inoshamisa (VR, driver, ...), kutaura izvozvo Vharuvhu Pierre-Loup Griffais inomiririra 13% yezvipo zveMesa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Valve izere nenhau huru dzemitambo uye yenyika yeLinux
Ndiri kufara kwazvo uye ndeyekubatsira kukuru asi ini ndoda ruoko kana ndichitsvaga chirongwa cheyangu cyber inonzi OPEN Kofi chirongwa icho chiri pachena kuti handichachiwana chero kupi kana chero chirongwa chekureruka kweiyo cyber pari zvino ini ndinoshandisa windows uye cyber control asi isu tinoda kutamira kune linux chero rubatsiro?
Pindura kuna juancusa
Seva inofanirwa kuiswa nenzira imwechete seWindows, uchigara uchifunga kuti inofanirwa kunge iri mukati me "nzira" yeWINE. Mune kumwe kugovera inogona kunge iri diski rese uye kune vamwe inogona kuganhurirwa kune folda.
Mutengi anofanira kurodha pasi slavolinux faira mufaira rakagadzirirwa izvi, nekuti mushure mekuriita inozogadzira mafaera akati wandei.
# slavolinux -tn -ip xxxx
Iko "n" kunofanirwa kutsiviwa nenhamba yekupedzisira uye xxxx inofanirwa kutsiviwa ne ip ye server pc.
Iyo yeLinux vhezheni yemutengi yakanyanya kukosha, inoshanda chete kuvhara mapc ari muX. Kuti utangezve iwo mapc anofanirwa kumhanya semubati.
Kana muranda we linux akaurayiwa maX asati aurayiwa, ichavhara.
Iwe unofanirwa kugadzira script yekutanga.
Mamwe emaraibhurari zvinoenderana nawo ndeaya:
Pango-1.0 uye GTK2.0
Linux Lite 3.8 yave kuwanikwa kurodha pasi
CodeWeavers inotangisa yayo CrossOver 17.1.0 yeLinux